Koox ka dhisan Talyaaniga oo Manchester United kula dagaalameysa saxiixa Ivan Rakitic – Gool FM
Koox ka dhisan Talyaaniga oo Manchester United kula dagaalameysa saxiixa Ivan Rakitic
(Barcelona) 15 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa la soo warinayaa inay naadiga Manchester United kula dagaalamayso saxiixa laacibka khadka dhexe ee Barcelona Ivan Rakitic, marka dib loo furo bisha Janaayo suuqa kala iibsiga xiddigaha.
Man United ayaa la rumeysan yahay inay la xiriirtay Barca si ay ugala xaajooto saxiixa 31-sano jirkaan, kaasoo kaliya ku soo bilowday hal kulan oo horyaalka La Liga ah marxaladaha hore ee xilli ciyaareedkan 2019-20.
Red Devils ayaa lagu soo waramayaa inay u sheegtay inay la imaan doonaan bartamaha xilli ciyaareedka dalab 35 milyan oo gini ah oo ay ku doonayaan saxiixa xiddigan heerka caalami ee Waddanka Croatia.
Yeelkeede, sida uu warinayo warsidaha Calciomercato kooxda AC Milan ayaa haatan ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddigan gaaray final-kii koobka Adduunka 2018, kaasoo dhowaan qirtay inuu doonayo inuu ka tago garoonka Camp Nou si uu u raadiyo meel uu si joogto ah uga ciyaari karo.
Warbixinta ayaa sheegaysa in Milan ay ka go’an tahay inay xiddigo khibrad leh ku kordhiso kooxdeeda bilowga sanadka 2020, iyadoo kooxda reer Talyaani ay isku diyaarinayso inay u dhaqaaqdo laacibkan bisha Janaayo.
Rakitic, kaasoo ku jira shaxda xulka qaranka Croatia ee ka qeyb qaadanaya ciyaaraha heerka caalami ayaa ku guuleystay afar horyaalka La Ligaha Spain ah iyo Champions League tan iyo markii uu Barca kaga soo biiray naadiga Sevilla xagaagii 2014-kii.